Mbola mahita ody UI vs Browser App amin'ny lahatsoratra sy resaka manerana ny Internet aho. Google dia efa nanaporofo fa afaka manana rindranasa mpizara mpiorina tena matanjaka amin'ny fampiasana tranonkala fitetezana ianao. Tsy misy fisalasalana ao an-tsaiko fa ity ny ho avin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana an-tranonkala. Ny rafi-piasana amin'ny ho avy dia mety ho navigateur fotsiny ary ny mpampiasa dia afaka mampiasa, mamindra, ary manokatra fisie manerana ny mpizara fa tsy amin'ny mpanjifa rehetra. Io dia hamonjy amin'ny bandwidth na koa fitehirizana eo an-toerana, fiarovana ny virus, fanavaozana, sns, sns.